Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Fanehoan-kevitr’ireo mpitoraka blaogy noho ny fandraràna gazetiboky · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Aogositra 2009 3:07 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika miora
Sokajy: Maraoka, Fahalalahàna miteny, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Teknolojia
Tamin’ny herinandro lasa, ny tontolon’ny blaogy maraokana dia nitraotra  noho ny fanapahan-kevitry ny governemanta tamin’ny fangoronana ireo gazetiboky maraokana malaza roa – TelQuel (amin’ny teny frantsay) ary Nichane – (Arabo)- tamin’ny namoahan'izy ireo fitsapan-kevitra ireo Maraokana tsotra momba ny fahitan'izy ireo ny ftondram-panjaka, ny Mpanjaka Mohammed VI, na dia teo aza ny filazana fa 91%-n’ireo Maraokana dia nankasitraka ny fitondrany nandritra ireo folo taona voalohany nitondrany.
Hetsika iray, mitondra ny anarana hoe “9% aho” (”I am a 9%”) dia natsangana maika mba hisehoan'ireo tsy faly tamin’ny fanapahan-kevitra. Nandritra iny herinandro lasa iny, ny Twittoma (vondrom-piarahamonina Maraokana mampiasa ny Twitter) dia nampiasa ny hashtag #9pcMaroc  mba hiresahana an’iny tranga iny (navoitra ao amin’ ity piece  -n'ny UAE's The National ity), raha mitohy mandalina ity resaka ity kosa ny tontolon’ny blaogy. Fivoarana iray vaovao, ny nanivanana ny gazety frantsay Le Monde (izay namoaka am-pahibemaso ny vokatra ) dia nampiakatr'afo ireo mpitoraka blaogy sasany. Rachid Jankari dia manoratra :
Mieritreritra aho fa ity fandraràna ity sy ny tohan-kevitra momba azy dia fihemorana any aoriana. Antony, fanamasinana bebe kokoa ny “hasin'ny” mpanjaka. Amin'ny fandrosoana io tohan-kevitra io dia heveriko fa tandindonin-doza indray ny ho avin’ny dinika momba ny ankehitrio sy ny hoavin'ny firenena.
Manoratra  i The Lounsbury ao amin'ny ‘Aqoul:
Mampihomehy koa izany. Manome tombony ny fanjakana ity fitsapan-kevitra ity ka tena hadàlana be ny fandraràna ny famoahana azy. Na izany aza anefa, maneho ny toe-tsaina Makhzen efa ntaolo izay mbola raiki-tampisaka ao amin’ny governemanta izy io. Na dia manana fahadisoana aza ny Mpanjaka (M6), tsy tafiditra amin'ireny ny hadàlana mivandravandra toy ity. (ireo endrika mampandry adrisa izay mbola mety ho azo iadian-kevitra ihany, na dia mbola vonona ny ho azy foana aza aho, jereo fotsiny ireo mitovy laharana aminy…) Nefa ilay mpisolelaka Naciri dia nanao ny zava-drehetra mba hahazoany ny zavatra iriany. Noho izany, eny, ny tany rehetra dia tokony hahalala fa ireo mpomba an’i Makhzen dia tsy mahatanty ny hoe fantatr’ireo mponina marokanina fa 91% “monja” no afa-po tamin’ny folo taona voalohany nitondran’i M6 araka ny fitsapan-kevitra iraisam-pirenena iray. Hanaraka eto ihany ireo vaovao fanampiny momba ilay fitsapan-kevitra.
Mafy ny adin'ireo ntaolo adala.
Ny mpitoraka blaogy maraokana Larbi, mahalala ny herin’ny Aterineto, dia namoaka ireo valin'ny fitsapan-kevitra  ao amin’ny blaoginy, sady nanamarika fa sarotra be ny hanafina amin’ny vahoaka ilay izy:
Tamin’ny farany, dia ny AFP no nahazo ny tombon-dahiny namoaka ity fitsapan-kevitra voarara ity, tamin’ny antsipiriany, miaraka amin’ireo isa. Fanapariahana izay naverin’ireo media eran-tany novokarina. Amin’izao fotoana, tena tsy afa-miala ireo mpandrara afa tsy hoe mandrara ireo haino aman-jery eran-tany angaha.
Ny mpitoraka blaogy Ibn Kafka koa dia namoaka ireo vokatra ireo , ary koa ny lahatsoratry ny gazety Le Monde, manentana ireo mpitoraka blaogy maraokana hafa hanao toy io ihany koa. Ny mpitsikera Kaouthar Lbiati dia mamaly:
Ny toerana misy ireo manam-pahefana Maraokana (Minisitry ny Fifandraisana) dia mbola nandiso fanantenana indray. Mazava ho azy fa ny vahoaka Maraokana, ohatran’ireo vahoaka hafa rehetra ihany, dia manana zo hitsara ny fanjakana izay mifamatotra aminy araka ny fifanarahan'i Al Beiâ nandritra ny taonjato maro izao. Te-haneho ny heviny amin’izay ny mponina Maraokana, te-hifanazava, ho henoina ary handray an-tànana ny ho aviny. Mba ajanony amin'izay ilay famoretana e!
Ho hamintinana, ny mpitoraka blaogy Maraokana ao amin'ny Réflexions et autres idées dia manambara:
Tokony hijery lavitra noho ny tendron'orony ny olona. Ho toy i Maraoka afaka 5, 10, 20, na 50 taona? Izany no tokony hiasan’ny Governemanta sy ny Fanjakana fa tsy ny fanambarana ireo Fatwas mandrara ireo gazety sy boky …
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/08/26/3065/
 ity piece: http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090806/FOREIGN/708059904/1011/NEWS
 namoaka ireo valin'ny fitsapan-kevitra: http://www.larbi.org/post/2009/08/Le-Sondage-Interdit?pub=1